Harry Kane oo fariin u diray asxaabtiisa Tottenham Hotspur kahor kulanka Arsenal – Gool FM
Harry Kane oo fariin u diray asxaabtiisa Tottenham Hotspur kahor kulanka Arsenal
Dajiye August 27, 2019
(London) 27 Agoosto 2019. Weeraryahanka kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur Harry Kane ayaa ku booriyay asxaabtiisa kooxda Spurs-ka inay iska iloobaan guuldaradii xanuunka bandneyd ee 1-0 aheyd ay kala kulmeen Newcastle United Axadii lasoo dhaafay.
Harry Kane ayaa ayaa dhinaca kale kula dar-daarmay saaxiibadiis inay diirada saaraan sida ay guul ku gaari lahaayeen kulanka adag ay Axada soo socota kula ciyaari doonaan Arsenal horyaalka Premier League.
Kulanka soo aadan ee London Derby ayaa wuxuu noqon doonaa tijaabo dhab ah ee lagu kala ogaan doono awooda ciyaareed ee kooxda Tottenham Hotspur, iyadoo guuldaro kale ee soo gaarta Spurs-ka ay ka dhigi doonto inay si xoogan kaga fogaadaan dhanka kala sareynta hogaanka horyaalka, waana waxa uu maanta ka digay kabtanka kooxda ee Harry Kane.
Harry Kane oo fariin digniin ah u dirayay asxaabtiisa kooxda Tottenham Hotspur wuxuu u sheegay:
“Marna ma dooneyno inaan galno fasaxa kulamada caalamiga ah kaddib guuldaro ama barbaro”.
“London Derby waa kulan weyn sida aan had iyo jeer kaga baranay, haddii aan badino waxay ka dhigeysaa mid aad u fiican, laakiin ma ahan kulan sahlan”.
“Waa inaan hubinaa inaan diyaar u nahay kulanka aan la ciyaareyno Arsenal, si aan u helno seddexda dhibcood”.
“Tani waa muhiim kadib bilow niyad jab ah, laakiin waxaa ina sugeysa waddo dheer si aan u jarno”.
Aaron Ramsey oo seegaya kulammada xulkiisa qaranka Wales uu ciyaarayo bisha September
Fadeexad Jaceyl: Thibaut Courtois & Sidii uu ula wareegay Gabadhii uu Jeclaa Kevin De Bruyne… (Xalkuse muxuu noqday?)